जवानी चल्ने, पानी नचल्ने ? (हेर्नुस् मनछुने भिडियो) - Enepalese.com
जवानी चल्ने, पानी नचल्ने ? (हेर्नुस् मनछुने भिडियो)
इनेप्लिज २०७३ माघ १ गते ११:२६ मा प्रकाशित
लगभग दुर्इ वर्षपछि यसै हप्ता ती दिदीसँग भेट भयो । चिन्नै सकिनँ पहिला त । ओहो ! दुई बर्षमा यति धेरै परिवर्तन ? शरदीय आकाशमा खुलेकी जून जस्ती दिदी औंसीको अन्धकारमा रूपान्तरित भइछन् । ढकमक्क फूल जस्तो फक्रिएको उनको बैंस जरा काटिएको लालीगुलाफ झैं मुर्झाएछ । स्याउदाना गाला निचोरेको निबुवाजस्तै भएछ ।